Gbasara anyị - Gopod Group Holding Limited
Gbasara Anyị Nkọwapụta Ụlọ ọrụ Akụkọ Companylọ ọrụ Asọpụrụ Asọpụrụ Akwụkwọ Patent Akwụkwọ iru eru Akụrụngwa ụlọ ọrụ
Guzosie ike na 2006, Gopod Group Holding Limited bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke ụlọ ọrụ amaara ama ama ama ama ama ama R & D, mmepụta na ire ahịa kọmputa na ngwa ekwentị mkpanaaka. Anyị nwere ụlọ mmepụta ihe abụọ na Shenzhen na Foshan na-ekpuchi ngụkọta nke mita 35,000, yana ndị ọrụ karịrị 1,500. Ọzọkwa, anyị na-ewu ogige ọgbara ọhụrụ nke ụlọ ọrụ teknụzụ dị square mita 350,000 na Shunde, Foshan.
Gopod nwere akụrụngwa zuru ezu na imepụta ihe na otu ndị R & D nke karịrị ndị otu 100, anyị na-enye ọrụ mmezi ngwaahịa zuru oke sitere na imepụta ụlọ ọrụ, imepụta usoro, imewe agbacha agbacha, imepụta ngwanrọ iji kpụzie mmepe yana mgbakọ ngwaahịa. The ụlọ ọrụ nwere azụmahịa nkeji gụnyere R & D, ịkpụzi, USB mmepụta, ike chaja omumuihe, metal CNC ogbako, SMT na nzukọ. Anyị enwetara IS09001: 2008, ISO14000, BSCI, SA8000 na asambodo ndị ọzọ, yana nnukwu ebe ikike izizi.
Na 2009, Gopod Shenzhen ụlọ ọrụ nwetara asambodo MFi wee bụrụ onye nrụpụta nkwekọrịta Apple.
Na 2019, ngwaahịa Gopod batara na ntanetị ahịa ụwa nke Apple Store ma ree ọfụma na America, Europe, Australia, Japan, Korea, wdg. Ndị ahịa anyị ewetala ngwaahịa Gopod na nnukwu ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na isi okwu ntanetị, dị ka Amazon, Best Buy, Fry's, Media Market na Saturn.
Anyị nwere ọkachamara ọrụaka ọrụ otu, elu mmepụta na ule akụrụngwa, elu mmepụta ike na ihe magburu onwe ya mma akara usoro, nke na-eme ka anyị na gị na ezigbo onye.
2021 Anyị na-aga n'ihu.
2020N'agbanyeghị isi mkpuchi nke ọrịa COVID-19 na-ebute na 2020, anyị nwetara uto ahịa na-adịgide adịgide n'afọ, n'ihi mbọ niile ndị ọrụ anyị niile gbara.
2019Anyị malitere oru chaja nke mbụ 100W GaN, yana igwe mmadụ ego ruru nde US $ 2.45. Anyị wetara ngwaahịa ndị metụtara USB-C na Apple Store ma yabụ hụ nnukwu ịpụ na ahịa. Ruo ugbu a, anyị nwere ọrụ iri na abụọ na Apple Store.
2018Anyị zigara ihe karịrị 5 nde ngwaahịa USB-C HUB, nke kachasị elu na ụlọ ọrụ ahụ. Anyị ike azụmahịa unit e tọrọ ntọala wee nweta zuru ụwa ọnụ Ikike nchọpụta Kemịkalụ n'ihi na ya ekemende ulo oru PowerHUB na PowerBank HUB, na-eweta ngụkọta ọnụ ọgụgụ nke anyị nchọpụta Kemịkalụ karịa 150. Ọzọkwa, azụmahịa unit akpọre ụlọ ọrụ-mbụ 130W PD PowerBank.
2017Anyị hụrụ azụmaahịa azụmaahịa siri ike, na ahịa karịrị US $ 100 nde maka oge izizi. Anyị nyefere nnukwu ụlọ ọrụ USB-C HUB na ụlọ ọrụ ahụ.
2016Emelitere Gopod ịbụ onye otu HDMI / USB-IF / QI / VESA. Ego ndi mmadu buru uzo tupu ego maka USB-C extender ruru US $ 3.14, nke kachasị na ụlọ ọrụ ahụ.
2015Gopod meriri CES Onyinye Ngwa Ahịa Kachasị mma na usoro USB-C nwetara onyinye onyinye IF. Ọ kwalitekwara MFi na V6.4. Factlọ ọrụ ya nwetara asambodo dịka ISO9000 / 14000 na BSCI.
2014Gopod kwalitere ngwa ahịa nchekwa MFi nke izizi n'ụwa, na inye igwe mmadụ ego ruru nde US $ 2. Ọ bụ ụdị nchekwa nchekwa kachasị elu nke ụdị ya n'ụwa.
2013Gopod guzobere nkenke akụrụngwa na-arụpụta akụrụngwa. Ejiri nnukwu akụrụngwa ọkachamara, ngalaba ahụ pụrụ iche na mmepụta nke ngwaike dịka aluminom alloy.
2012Gopod guzobere otu ụlọ ọrụ azụmaahịa USB, nke nwere ọrụ na mmepụta nke eriri dị iche iche gụnyere eriri USB nke MFi.
2011Gopod merie ndị Product Design Award na CES na US Ọ na-na-ulo oru nke mbụ MFi-gbaara foldable batrị.
2009Gopod nwetara asambodo MFi nke Apple ma bido mepee ma mepụta ngwa ngwa ekwenti MFi
2008Gopod degharịrị atụmatụ ya iji lekwasị anya na imepụta ngwa ekwentị mkpanaaka.
2006E hiwere Gopod, ọkachamara na R&D, mmepụta na ire ahịa kọmputa.